मलाई मार्दै (ब्लग) सफ्टवेयर | Martech Zone
बुधवार, अगस्त 1, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
आगन्तुकहरु: Down 33% तल
पृष्ठदृश्य: Down 18% तल
आरएसएस सदस्यता: %% माथि
Adsense: Down 70% तल
टेक्नोराटी रैंक: Down% तल।
यी मेरा ब्लगमा अन्तिम दुई हप्ताको लागि तथ्या !्कहरू हुन्! मेरो नियमित आगन्तुकहरूको लागि, तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि म लगातार ब्लग गर्दै छुइन - ती मध्ये एक मुख्य नियम जुन तपाईंले कहिल्यै भाँच्नु हुँदैन। ब्लगिंग को बारे मा छ गति। एकचोटि तपाईले गति हराउनु भयो भने पछाडि झुण्ड्याउने कुनै तात्कालिक साधन छैन।
मैले थाहा पाएँ कि केहि ब्ल्गरहरूले मरेका ठाउँहरू भर्नको लागि उत्कृष्ट काम गरीरहेका छन्:
सबै भन्दा लोकप्रिय ब्लग पोष्टहरू पुन: कब्जा गर्दै।
मल्टिमेडिया (भिडियो वा ध्वनी) क्लिपहरूमा पुलिंग जुन शीर्षकमा छन् र मार्फत उपलब्ध छन् Youtube र अन्य च्यानलहरू।
केवल रणनीति मैले लिइरहेको छु पोष्टिंग जारी राख्नु Del.icio.us लिंकहरू। मैले मूल रूपमा लेख्न बन्द गरें, लेख्ने बारेमा सोच्दै र अन्य ब्लग कुराकानीमा भाग लिन बन्द गरें। पाठकहरूलाई कायम राख्न मैले वैकल्पिक विधिहरू राख्नुको एउटा कारण यो हो कि म गरे के हुन्छ हेर्न चाहन्छौं।
भएको एक आरएसएस फिड एक प्रकाशन विधि देखिन्छ जुन ग्राहकहरूले (र बढावा पनि) राख्न सक्दछन्। म सकारात्मक छैन, तर म शर्त दिन तयार छु कि यो भ्रमणकर्ताहरू थिए जुन यहाँ खोज ईन्जिनले आएका थिए, याद गरे मसँग कतिजना ग्राहकहरू छन्, र यसलाई सहभागी हुन योग्य ठान्छन्। दैनिक लिंकहरू डेल.आईसीओ.युसबाट कम्तिमा यी नयाँ ग्राहकहरूलाई केही मूल्य प्रदान गर्दैछ।
यदि तपाईं नयाँ ग्राहक हुनुहुन्छ भने, मबाट अधिक आशा गर्नुहोस्! मँ एक रोजगार परिवर्तनको बीचमा छु र ग्राहकलाई म्यापि application अनुप्रयोग वितरण गर्दैछु। सत्य भन्न सकिन्छ, म पनि एक बियर वा दुई हरेक साँझ मेरो वर्तमान रोजगारदाता बाट मेरो साथी कर्मचारीहरु संग छु। तिनीहरू द्रुत रूपमा बढ्दै गरेको इंक company०० कम्पनी हो र म कर्मचारीहरूलाई सोच्न चाहन्न कि म केही नकारात्मक कारणले कम्पनी छोड्दै छु ... म केवल नयाँ चुनौती र शानदार अवसरमा सर्दै छु।
सोमबार मेरो नयाँ रोजगारदातासँग पहिलो दिन हुनेछ र म यसको लागि प्रतीक्षा गर्दैछु। अर्को हप्ताको अन्तमा, चीजहरू शान्त हुनुपर्दछ र म फेरि काममा फर्किनेछु। यो कामको साथ, म आउटसोर्स विकास फर्महरू, एक नयाँ अनलाइन उद्योग (रेस्टुरेन्ट मार्केटिंग र संरक्षण), नयाँ टेक्नोलोजी (बिक्री एकीकरण बिन्दु) र ई-वाणिज्यको संपर्कमा छु। मँच्ने बित्तिकै केही उत्कृष्ट सामग्रीको लागि तयार हुनुहोस्!
Martech Zone पुनरुत्थान आउँदैछ!
परियोजना: जंगली चराहरू असीमित - Google नक्साको साथ रमाईलो
अगस्ट 1, 2007 मा 8: 23 AM
डग - तपाईंको ब्लग राम्रो छ। गर्मी र तपाईको क्यारियरको सबै नयाँ अवसरहरूको आनन्द लिनुहोस्।
अगस्ट 1, 2007 मा 10: 19 AM
भर्खर तपाईलाई यो थाहा दिन चाहानुहुन्छ
म अझै पढ्दै छु। हालसालै, बाहिर
जुलाई मा छुट्टी मा धेरै शहर।
यद्यपि यससँग एक कार चुम्बक बनायो
मेरो वेबसाइट मेरो ब्लगमा फोटो खोज्नुहोस्।
तपाईं के हेर्न उत्साहित हुनुहुनेछ
टेक्नोराटीको बारेमा पढेर सामेल भयो
तपाईं आफ्नो साइट मा।
अब मलाई थप Fav चाहिन्छ।
तपाईंसँग मेरो लागि केहि सुझावहरू छन्?
शुभकामना तपाईको नयाँ काम संग।
अगस्ट 1, 2007 मा 11: 17 AM
मलाई लाग्छ म आश्चर्यचकित छैन। मसँग आरएसएस फिडहरू स्क्यान गर्न पर्याप्त थोरै समय छ एकल ब्लग साइटहरूमा जान दिनुहोस्। (सम्पूर्ण कुरा मलाई दोष दिनुहोस्!) मुद्दा झन् खराब बनाउनको लागि, यदि ब्लगरले पूर्ण फीड प्रदान गर्दैन भने म सामान्यतया ब्लब पढ्न सक्दिन र _फिर_ प्रस्ताव प्रस्ताव पूरा गर्न साइटमा जानु पर्छ। (माफ गर्नुहोस्, मलाई फेरि दोष दिनुहोस्, यो सबै मेरो गल्ती हो।)
अगस्ट,, २०१ 1 2007:२१ अपराह्न
एक ब्रेक भएको ठीक छ र क्यारियर चाल संग राम्रो भाग्य।
नम्बरहरूको बारेमा चिन्ता नलिनुहोस्। मेरो आफ्नै ब्लगमा धेरै स्थिर ट्राफिक नम्बरहरू, पृष्ठ दृश्यहरू र आरएसएस ग्राहकहरू छन्। म StumbleUpon बाट कहिले काँही उकालो लाग्छ तर यो यसको बारे हो। तर मसँग हप्तामा दुई पटक मात्र ब्लग गर्ने समय हुन्छ त्यसैले म कहिले पढ्ने छैन।
म एक हप्तामा posts पोष्ट सम्म मलाई ल्याउन चाँडै नयाँ फिलर पोस्ट युक्ति प्रयास गर्न जाँदैछु। म यो कसरी जान्छ देख्दछु।
अगस्ट 2, 2007 मा 7: 23 AM
मार्केटिंग टेक्नोलोजी ब्लग पुनरुत्थान आउँदैछ!
र म यहाँ छु जब यो गर्दछ।
अगस्ट 2, 2007 मा 9: 06 AM
पोष्टको प्रशंसा गर्नुहोस् - रोजगार परिवर्तनको साथ शुभकामना! यो गतिको बारेमा तपाइँका विचारहरूलाई ब्याक अप गर्दछ, तपाइँले ठीक औंल्याउनुभयो। कसैलाई पनि दिनको विजेटमा २ घण्टा थप थाहा छ ?! 😉
के तपाईंले क्वान्टकास्टको बारेमा सुन्नुभयो, एउटा सेवा जसले स्पेक्ट्रम भरबाट हिट तथ्या .्कहरू पाउँछ। तपाई कुनै नराम्रो हिसाबले हेरिरहनु भएको छैन, नियमित तेस्रो राम्रो रेगुलरको साथ, र visitors० जना मध्ये १ जनालाई "लत" को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ:
मैले उनीहरूको जाभास्क्रिप्ट मेरो फुटरमा इम्बेड गरेको थिएँ केही समयको लागि। यद्यपि यो पोष्ट राख्नु भएकोमा धन्यवाद! म वास्तवमै गएको छैन र तथ्या .्कहरू जाँच गरें।
म तपाईं जस्तै साथीहरु को लागी आभारी छु, कि फिर्ता आउन र कुराकानी मा सामेल हुन। धेरै तरिकामा, म एक पर्यवेक्षक हुँ ... अन्य मान्छेहरू बीचको कुराकानी जाँच गर्दै।